Barnaamijkaaga waxa lagu habeeyay DayHeart! Si bilaash u dhamaystir bogaaga, caawi waalidka si ay kuu helaan, oo ku guulayso lacag gaadhaysa illaa $1,000. Soo degso dalabka ama ku maaree macluumaadkaaga internetka
Kaga Andacood Bogaaga Halkan
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin la soo wadaago in DayHeart hada la furay iyo inaan anigu gaadhayo adeeg bixiyayaashii ugu horreeyay si ay kuu siiyaan fursad aad si bilaash ah ugu buuxsato barnaamijkaaga boggaDayHeart inta ka horraysa Maajo 1, 2020 oo ugu guulaysto lacag gaadhaysa $1,000 (eeg sharciyada hoose ee la bixitaanka).
Barnaamijkaagu wuxuu marka horeba leeyahay bogga DayHeart ee fudud — Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad maamusha oo aad ku darto macluumaad badan oo ku saabsan barnaamijkaaga. Haddii aad bogaaga dhamaystirto inta ka horaysa Maajo – 1-deeda, waxaad gelaysaa nasiib aad ku guulaysan karto lacag gaadhaysa illaa $1,000!
*Xeerarka Tartanka: Hal barnaamij wuxuu ku guulaysan doonaa $1,000, Hal barnaamij wuxuu ku guulaysan doonaa $750, Hal barnaamij wuxuu ku guulaysan doonaa $500, Saddex barnaamij oo kalena waxay ku guulaysan doonaan $250. Si aad uga qayb gasho bakhtiyaa nasiibka, waa inaad maamushaa bogaaga DayHeart oo aad ku dartaa macluumaadka inta ka horaysa Maajo 1, 2020. Adeeg bixiyayaashu waxay soo saarayaan hal macluumaad barnaamij kasta oo bogiisa la dhammaystiray.